होटलहरु अति प्रभावित छन् तर, अबको सम्भावना राम्रो छ : नितेश पोखरेल (अन्तरवार्ता) - arisenepal
होटलहरु अति प्रभावित छन् तर, अबको सम्भावना राम्रो छ : नितेश पोखरेल (अन्तरवार्ता)
in FEATURE, अन्तरवार्ता, अर्थ, विशेष
नेपालमा कोरोनाका कारण होटलहरु संकटमा छन् । आर्थिक त्रासदी र मन्दीले नेपालमा धेरै जसो होटलहरु विस्थापित हुँदैछन् भने केहि नयाँ होटलहरु खुल्दै पनि छन् । यस शिलशिलामा होटलको व्यवस्थापन क्षेत्र सम्हाल्दै आएका विभिन्न हस्पिटालिटी (आतिथ्य) उद्योगमा कार्यरत कम्पनीहरु नेपालबाट पलायन भइरहेको अवस्था छ । विदेशका कम्पनीहरुले नेपालका होटलहरुसँगको सहकार्य छाडी रहेको बेला नेपालमा नेपालीहरुले नै प्राइड हस्पिटालिटी नामको कम्पनी शुरु गरेका छन् । यसैबीच आज हामीले नेपालमा होटल तथा आतिथ्य उद्योगको अवस्था, सम्भावना र चुनौती साथै नयाँ शूरुवात भएको प्राइड हस्पिटालिटीका बारेमा चर्चा गर्दै छौँ । प्रस्तुत छ प्राइड हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नितेश पोखरेलसँग सचिन राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः
प्राइड हस्पिटालिटी के हो ? शुरुवात कसरी भयो ?
प्राइड हस्पिटालिटी भनेको आतिथ्य विशेषज्ञहरूको एउटा समूह हो, जसले धेरै लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव बटुलेका छौँ । यो समूहले ग्राहकहरुको सबै भन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु र अवसरहरुमा ध्यान केन्द्रित गछौँ जस्तैः रणनीति, मार्केटिंग, संगठन, संचालन, प्रविधि, रूपान्तरण, डिजिटल, उन्नत विश्लेषण, कर्पोरेट वित्त र स्थिरता आदि । होटलले ग्राहकको सन्तुष्टि र नाफा बढाउँदै दीर्घकालीन दिगो सफलता प्राप्त कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखि समूहले काम गर्छ । अब प्राइड हस्पिटालिटी कोभिडको विषम परिस्थितिमा हामीले शुरुवात ग¥यौँ यसको योजना भने अगाडी देखि कै नै थियो । धेरै होटलहरुमा काम गरियो र काम गर्दै जाँदा यसको भविष्य राम्रो देख्यौँ, त्यसपछि नेपाल मै बसेर नेपालकै म्यानेजमेन्ट किन गर्न नसकिने भनेर बिचारमंथन गरेपछि प्राइड हस्पिटालिटी नाम दिएर कम्पनिको शुरुवात गरेका हौँ ।
तपाईंहरूको टिममा को–को र कस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ?
हामीसँग पेशेवर (प्रोफेशनल) आर्किटेक (नक्शा वा रुपरेखा तयार पार्ने व्यक्ति) देखि अपरेशन टिमसम्म हुनुहुन्छ जसको अनुभवसँगै उच्च शैक्षिक योग्यता छ । एचआर म्यानेजर हुनुहुन्छ जमूना ढुङ्गाना जो मानव संसाधन, तालिम र कर्मचारी संलग्नता सम्बन्धि विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । वित्त निर्देशकमा रमन कुँवर जो वित्तीय लेखा, नीति र प्रक्रिया विकासकर्ता, होटल बजेट र वित्तीय विश्लेषणको क्षेत्रमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । त्यस्तै अनिल चौधरी जो परियोजना परामर्शदाता हुनुहुन्छ उहाँ चै होटल प्रोजेक्ट, एम.ई.पी, आर्किटेक्ट–डिजाईनमा विशेषज्ञ । खाद्य र पेय सेवाहरूमा विशेषज्ञहरु मुकेश यादव र राकेश यादब कर्पोरेट कार्यकारी शेफका रुपमा हुनुहुन्छ जससँग पाककला क्षेत्रको भान्सा व्यवस्थापन, मेनू योजना र मेनु ईन्जिनियरिङ्ग विषयमा १० वर्षभन्दा लामो अनुभव छ ।
यस अघि नेपालको चार तारे, पाँच तारे होटलको व्यवस्थापन नेपाल बाहिरको कम्पनीहरूले गर्ने गरेको थियो । अहिले तपाईंहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ , तपाईंहरू र ती कम्पनिले गर्ने कार्यमा के फरक छ, र फाइदा के ?
आर्थिक त्रासदी र मन्दीले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरु आँउदै पनि छन् र कति विस्थापित पनि हुँदैछ । हामीले गर्ने काम र उनिहरुले गर्ने काम एउटै हो हुन त उनिहरु र हामीले दिने सेवा पनि एउटै हो । तर, भिन्नता के छ भने हामी वास्तविक व्यापार रणनीतिलाई हेरेर काम गर्छै । यता, विदेशीले भने वास्वविक नभइ इम्याजिनेशन (अनुमान)को आधारमा काम गर्दछन् । हामी स्वदेशी भएकाले वास्तविक हेर्छैँ, कति लगानी गर्दा कति नाफा, कति समयमा भन्ने ध्यान दिन्छौँ । बाहिरको कम्पनिलाई दिदाँ डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ जसले महँगो पर्न जान्छ तर हामी उनिहरुले दिने जुन स्ट्यान्डरको सेवा छ त्यहि नै हामी दिन्छौँ तर सस्तोमा । स्ट्यान्डर ओपरेटिङ्ग प्रोसिडियूर (एसपीओ) जसलाई नेपालीमा मानक सञ्चालन प्रक्रिया भनिन्छ त्यो अस्तराष्ट्रिय स्तरकै हुन्छ तर सस्तो, यसले होटल सञ्चालकलाई पनि सहुलियत हुन्छ । त्यति मात्र होइन नेपालको पैसा पनि नेपालमै रह्यो । यूवाहरुले रोजगार पनि पाए ।
तपाईंहरूले होटलहरूलाई दिने सेवा सुविधा के–के छन् ?, मेनपावर त चाहिन्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी, हामीसँग सहकार्य गर्नु भएका व्यसायीको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछौं । सम्पत्ति व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय रिपोर्टिंग, ब्रान्डिङ्ग र पदोन्नतीहरू हाम्रो प्रमुख विशेषज्ञता हुन् । त्यस्तै नेपाल टुरिजम बोर्डले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्ने र होटललाई ‘सर्टिफाइड’ गराउछौँ । अब मेनपावरको कुरा चैँ स्वदेश भित्रैका दक्ष व्यक्तिहरुलाई नै प्रयोग गर्छैँ । धेरै व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ जो दक्ष हुनुहुन्छ तर अवसर भने जस्तो छैन, उहाँहरु जस्ता व्यक्तिहरु नै हामी परिचालन गछौँ ।
नेपालमा चार तारे र पाँच तारे होटलहरूका अवस्था र सम्भावना कस्तो छ ?
नेपाल पर्यटनको विकासशिल राष्ट्र हो । पर्यटनको राम्रो सम्भाव्यता छ । बाहीरको ब्राण्डहरुले पनि रुची देखाइरहेका छन् । पर्यटकहरु नेपालमा आउनका लागि धेरै कारणहरु छन् जस्तैः सगरमाथा, लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, इलाम छ । छेउमै सिक्किम पनि छ तर चार तारे र पाँच तारे होटलहरु कम छन् त्यसैलै अझै आउनु पर्छ, डिमाण्ड धेरै छ ।
यसले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा के कसरी मद्धत गर्छ ?
कति वटा ठाँउको हामीले अनुभव गरेका छैनौँ तर विदेशी पर्यटकले अनुभव गरेका छन् । डिजिटलको जमना छ गुगल हेरेर पनि त्यहाँ गइरहेका हुन्छन् । उनिहरु त्यहाँ पुग्छन् तर राम्रो स्ट्यान्डर होटलहरु त्यहाँ छैन । म भन्छु पर्यटनको विकास नै हामी सबैको विकास हो । कुनै एउटा ठाँउमा राम्रो पाँच तारे अथवा चार तारे होटल खुल्यो भने त्यहाँको पूर्वाधार, रोड, बिजुली, सञ्चार क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ । त्यहाँको उत्पादित वस्तु निर्यात हुन्छ । आर्थिक अवस्था बलियो हुनुको साथै त्यस ठाँउको प्रचार पनि हुन्छ । जसले पर्यटकको संख्यामा वद्धि र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने त कुरै छैन ।
प्रदेश एकमा तपाईंहरूले कुन–कुन होटलसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ? काठमाण्डौ भन्दा पूर्व रोज्नुको कारण के ?
झापामा ‘अस्वात’ होटलको ‘प्रि ओपनिङ’ गर्दै छौँ । इटहरीको गोर्खा होटल, ‘खुकुरी’ भन्ने चाँडै आउदै छ । वाँसबारीमा छ एउटा रिर्सोट, विराटनगर र हेटौँडाका केहि होटलसँग सहकार्य गर्दैछौँ । प्रदेश एकलाई नै रोज्नका कारण चैँ पूर्वमा लगानीकर्ताको रुची बढ्दो छ । भारतसँगको नाकाले पनि प्रभाव पारेको छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने भनेको भारतबाट नै हो ।
अहिले कोभिडले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ, होटल र हस्पिटालिटी व्यवसाय संकटको कुन अवस्थामा छ, हस्पिटालिटी कम्पनीको नाताले यसलाई पूरानो अवस्था फर्काउन के कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ ?
होटलहरु अति प्रभावित छन् । यसलाई उकास्न हामीले प्राविधिक कुराहरुमा विभिन्न रणनीतिहरु बनाएका छौँ । प्रविधिलाई प्रयोग गरेर टचलेस सिस्टमको विकास गर्दैछौँ । धेरै होटलहरुलाई जोड्ने हिसाबले हामीले चाँडै डिजिटल सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउदै छौँ ।
सरकारले तपाईंहरूका लागि के गरिदिन सक्छ ?
सरकारले नेपाली हस्पिटालिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । होटलहरुलाई लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) को व्यवस्था गनुपर्यो मतलव ‘सर्टिफाइ’ गराउनुपर्यो । होटल तथा हस्पिटालिटी कम्पनीहरुलाई वर्गाीकरण साथै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्यो । करको कुरामा सहुलियत दिनुपर्यो । विदेशी कम्पनीहरुसँग सहकार्यको वतावरण मिलाइ दिनुपर्यो ।
अन्त्यमा, तपाईंहरूको आगामी योजनाहरू के-के छन् ?
हामी अब नेपालभित्र मात्रै नभएर भारत, भुटान, चाइना, सिंगापूर लगायतका देशहरुमा चाँडै कदम राख्दैछौँ । आगामी पाँच वर्षमा तपाईहरुले एक सय वटा होटलमा हाम्रो बोर्ड देख्नु हुनेछ । हामी टप लेवलको हस्पिटालिटी कम्पनीका रुपमा उभिन्छौँ । यस क्षेत्रमा रुची भएका यूवावर्गलाई दक्ष बनाउदै लान्छौँ । डिजिटल प्याटफर्मको विकास गछौँ । पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरुको विकास तथा निमार्णलाई अघि बढाउछौँ ।
“नितेश पोखरेल हस्पिटालिटी (आतिथ्य) उद्योगमा १५ वर्षभन्दा बढि काम गरेका व्यक्ति हुन् । कतार एयरवेज, जुमेराह ग्रुप अफ होटल्स, इन्टरकन्टिनेन्टल होटल समूह, रेडिसन होटल्स, याक र यती, म्यारियटबाट अल्फ्टलगायतमा काम गरिसकेका छन् । मानव संसाधन, सिकाइ र विकास, होटल अपरेसनहरूमा होटल परामर्शदाताका रुपमा परिचित छन् । हाल उनि प्राइड हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ )हुन् ।”